अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Sudur Sanchar
चर्चित अधिवक्ता स्वागत नेपाल नेतृत्वको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी नेपालले छिमेकि मूलुक इण्डीयालाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्दै त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताका बिषयमा खरो रुपमा उत्रँदै आएको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले इण्डीयाले पटक पटक देखाइरहेको हेपाह प्रवृतीको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको छ । नेपाल सरकारले दरो सँग अडान लिन नसक्दा सो पार्टीले भने इण्डीयालाई शत्रु राष्ट्र समेत घोषणा गरेको छ । मोदीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली भूभाग लिपुलेक सन्दर्भमा सँधियार शत्रुराष्ट्रको अभियोग लगाएर नेपालबाट पत्राचार भएको छ । उन्नत लोकतन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष स्वागत नेपालको दस्तखतसहित नेपालका तर्फबाट मोदीलाई सम्बोधन गरी पठाईएको पत्रमा यस्तो आरोप लगाईएको हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले लिपुलेक प्रकरणमा भारतको हस्तक्ष
साउदीबाट आएको नेपाली छोराको भिडियोले सबै स्तब्ध, थामिदैनन् आँशु
काठमाडौ । साउदी अरबबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आएको एउटा भिडियोले दुनियाँलाई नै स्तब्ध बनाएको छ । दुई बर्ष अघि न्यू वल्ड ओभरसिज प्रा.लि. चापागाउँ ललितपुरबाट रोजगारीका लागि साउदी पुगेका एक नेपालीको अवस्था उक्त भिडियोमा देखिएको छ । भिडियो देख्दा जो कोहीको आँखाबाट आँशु रोकिन्न । साउदीको जेद्धामा एउट कोठामा उनी छटपटाइरहेका हुन्छन् । लावाङ्ग लामाले भिडियो फेसबुकमा लाईभ गर्छन् । भिडियोमा भनिरहेको सुन्न सकिन्छ अहिले म साउदीको जेद्धामा छु । यहाँ नेपालको गाउँभन्दापनि कहालीलाग्दो अवस्था छ । न बत्ति छ न त एसी नै । पिउने पानीपनि पाइएको छैन । उनको भिडियोमा देख्न सकिन्छ एक नेपाली छोरा पेट थिचेर छटपटाइरहेका हुन्छन् । भिडियो हेर्दा उनलाई असाध्यै पिडा भएको छ । उनी भूइमा छटपटाइरहेका हुन्छन् । भिडियो खिचिरहेकाले यी साथी १८ महिनादेखि बिरामी परेको र आज निक्कै साह्रो परेको भनिरहेका छन् ।
अस्ट्रेलियामा को’भिडबाट एकै दिन ७६ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अस्ट्रेलियामा कोभिडबाट एकै दिन ७६ जनाको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमध्ये अधिकांश न्यु साउद वेल्स, भिक्टोरिया र क्विन्सल्यान्डका छन् । अस्टेलियामा को’भिडबाट एकै दिन यति ठूलो संख्यामा मृ’त्यु भएको यो पहिलो पटक हो ।यसअघि सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा भिक्टोरियामा को’भिडबाट एकै दिन ५९ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । पछिल्लो एक सातामा अस्ट्रेलियामा को’भिडबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ३५९ पुगेको छ । यो अस्ट्रेलियामा को’भिड फैलिएपछि कूल मृ’त्यु हुनेको १३ प्रतिशत हो । न्यु साउद वेल्समा मंगलबार एकै दिन २९ हजार ८३० जनामा सं’क्र’मण देखिएको छ । अस्ट्रेलियाका अधिकांश अस्पताल को’भिड बिरामीले भरिएका छन् । अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली विद्यार्थीका लागि हप्तामा २० घन्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस ३० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी जे
मलेसियाबाट २४ वटा श’व ल्याएपछि क्याप्टेन लामाले आखाँ भरि आशु लिएर भा’वुक हुँदै यस्तो भने
नेपाल वायु सेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट विजय लामाले आज मलेसियाबाट एयरबस वाइडबडी जहाजमा’र्फत नेपाली युवाको २४ वटा श’व र तीनवटा अस्तु लिएर फर्किए। यसअघि उनैले १७ जुलाईमा १२ वटा र २१ जुलाईमा एक नेपालीको शव लिएर आएका थिए। उनी नेतृत्वको नेवानि जहाजले एक सातामै ३७ वटा शव नेपाल ल्याएको छ। मलेसियामा ज्या’न गुमाएका नेपाली युवा युवती मध्ये अझै १८ जनाको शव ल्याउन बाँ’की रहेको उनले बताएका छन्। मनमा धेरै दुख लाग्दा लाग्दै पनि बा’ध्य छौँ शव ल्याउनलाई उनले भनेका छन्दे शको स्थिति नै यस्तै छ । धनी र ठूलाब’डाहरूलाई मात्रै हो त यो देश कि सबैलाई हो ? उनी नेतृत्वको चालक दलले मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अन्य नेपालीलाई पनि ल्याए। घर फर्किन लागेका नेपाली देख्दा उनको मन रमायो तर कयौँ श’व पनि ल्याउनुपर्दा उनको मन कुँ’डिएको छ। आज नेवानिको आरए ४१६ उ’डानमार्फत २४ शव ल
चर्चित अभिनेत्री रायमा बन्द बोराभित्र शरिर दुई टु;;क्रा भएको अवस्थामा मृ;;त भे;;टिइन्
आइतबारबाट बेपत्ता भएकी बंगलादेशी अभिनेत्री रायमा इस्लाम शिमूको शव एक बोरामा बन्द अवस्थामा भेटिएको छ । शिमूलाई दुई टुक्रा पारेर शवलाई बोरामा बन्द गरिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो । प्रहरीका अनुसार शव ढाकाको केरानीगञ्जमा अवस्थित आलियापुर इलाकाको हजरतपुर पुल नजिकैको सडक किनारमा सोमबार बिहान भेटिएको थियो । ३५ वर्षकी अभिनेत्रीको घाँटीमा निशान थियो । प्रहरीले यो मामलामा उनका पति र पतिका ६ साथीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले अभिनेत्रीका पति सखावत, उनका साथी र चालकलाई तीन दिन हिरासतमा लिएको छ । पति सखावतले घरेलु विवादका कारण रायमाको ज्यान लिएको स्वीकारेका छन् । प्रहरीले रायमाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि मिडफोर्ड अस्पतालमा पठाएको छ । रायमा ढाकाको ग्रीन रोड इलाकामा पति र दुई सन्तानका साथ बस्थिइन् । शिमू आइतबार बिहान मावामा सुटिङका लागि घरबाट निस्किएकी थिइन् । त्यसपछि उनी सम्प
Jan172022 by Bibek PoudelNo Comments
काठमाडौंको कीर्तिपुर घर भएकि सिड्नीमा एक नेपाली विद्यार्थी मृ’त फेला
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्दै आएकी एक नेपाली युवती मृ'त अवस्थामा फेला परेकी छन्। सिड्नीस्थित अर्चामनमा बसोबास गर्दै आएकी २२ वर्षिय सुस्मिता कपाली मृ'त अवस्थामा भेटिएकी हुन्। काठमाडौंको कीर्तिपुर घर भएकी कपाली अध्ययनका लागि २ वर्षअघि अष्ट्रेलिया आएकी थिइन्। हाल एमपीएल पढिरहेकी उनको घ'टनाबारे न्यु साउथ वेल्स प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मृ'तक सुष्मितालाई नजिकबाट चिन्ने सीड्नीका युवा उद्यमी उद्धव भट्टले यो घ'टनाले आफू निकै दुःखीत भएको सेतोपाटीलाई बताए। मिजासिली स्वाभावकी सुष्मिताको असामहिक निध'नले आफू निकै स्त'ब्ध भएको र सुष्मिताको परिवारलाई भेटेर सा'न्त्वतासमेत दिएको उनले बताए। मृ'तकको श'व नेपाल पठाउन न्युसाउथ वेल्समा गैर आवासीय नेपाली संघले गो-फण्डमि मार्फत सहयोग संकलन सुरू गरेको छ । अभियानबाट १० हजार डलर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १३ हजार ६ सय ५९ डलर संकलन
सिओल : दक्षिण कोरियाको सरकारले कृत्रिम सूर्य बनाउने योजना अघि सारेको छ। कोरियाले बनाउन लागेको कृत्रिम सूर्यको नाम ‘के स्टार’ दिइएको छ। अन्तराष्ट्रिय सन्चार संस्था एएनआईले दिएको जानकारी अनुसार कोरियाले बनाउन लागेको कृत्रिम सूर्यको सतहको तापक्रम १ सय मिलियन डिग्री हुने बताइएको छ। यो तापक्रम ३ सय सेकेण्डसम्म कायम राखिनेछ। परमाणु टेकनिकको व्यवसायिकरणका लागि ३ सय सेकेण्डसम्म तापक्रम कायम राख्नैपर्ने हुन्छ। कोरियाको मिनिष्ट्री अफ साइन्स एण्ड आइसिटीले गत डिसेम्बर ३० तारिखका दिन यस्तो किसिमको कृत्रिम सूर्य बनाउने घोषणा गरेको हो। यस मन्त्रालयले कोरियामा हरेक पाँच पाँच बर्षमा प'रमाणु उर्जा विकासका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु तय गर्ने गर्दछ। कोरियाको यो योजनामा निर्माण हुने ‘के स्टार’ नामक कृत्रिम सूर्यको परीक्षणका क्रममा विभिन्न आन्तरिक परीक्षण गर्दै सुधार्दै अघि बढ्ने बताइएको छ। विगतका
प्रधानमन्त्री मोदीलाई लाई कालो झण्डा देखाउने महिलालाई गो’ली हानियो
पीको सुल्तानपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कालो झण्डा देखाउने महिला रिता यादवलाई अज्ञात व्यक्तिले गो,ली हानेका छन् । गो,ली उनको खुट्टामा लाग्यो । उनलाई घाइते अवस्थामा सुरुमा सिएचसी लुम्भुआमा भर्ना गरियो र पछि थप उपचारका लागि सुल्तानपुर जिल्ला अस्पताल पठाइयो । त्यहाँ उनको उपचार चलिरहेको छ । सर्कल अफिसर लम्भुआ सतिश चन्द शुक्लाले पीडितको बयान दर्ता गरेका छन् । रिता यादवले मिडियालाई दिएको बयानमा भनेकी छिन्, ‘म पोस्टर बनाउन सुल्तानपुर गएकी थिएँ, त्यहाँबाट घर गइरहेकी थिएँ । त्यति नै बेला हाईवेमा लम्भुआ नजिकै तीन व्यक्तिले ओभरटेक गरेर मेरो बोलेरोलाई रोके र गा,ली गर्दै मा,र्ने ध,म्की दिए ।’ तस्विर अझ, धनकुटामा आज एकै दिन १२ जनालाई घा’इते बनाउने कुकुरलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा कुकुरको मृ त्यू भएको छ । विहान धनकुटा नगरपालिका २ भिरगाउँ तर्फबाट आएको कुकुरले
Jan32022 by Bibek PoudelNo Comments
एजेन्सी । विवाह भएको दुई महिना पछि एक पुलिसकर्मीले आफ्नी श्रीमतीको मृत्युको खबर सहन सकेनन् र आफ्नो जीवन त्यागे। विशेष कुरा यो हो कि जहां श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो उनी त्यही ठाउँमा गएर झु’ ण्डि ए । घटना भारत छत्तीसगढ बालोदको हो। यहाँ एक सिपाहीले आफ्नी श्रीमतीको निधन सहन नसकेर संसार छोडेका छन् । वास्तवमा बालोद पुलिसले टेकपार निवासी मनीष नेतमको शव झु ण्डि एको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्यो । प्रहरी जवान मनीष नेताम धमतरी जिल्लाको बोराई पुलिस स्टेशनमा कार्यरत थिए। दुई महिना अघि मात्र उनको बिहे भएको थियो । उनकी श्रीमती हेमलताको घरमा लगाइएको टाईल्समा चिप्लिएर निधन भएको थियो । २ महिना पहिले विवाहको बन्धनमा बाँधिएका यी दुई श्रीमान् श्रीमती एक अर्कालाई धेरै माया गर्थे। गाउँलेहरुका अनुसार श्रीमतीको असामयिक मृत्युबाट दुखी प्रहरी पति हरेक दिन अन्तिम संस्कार गरेको स्थलमा गएर आ